Maritime Mutemo muUAE | Maritime Mutemo Makambani muIUAE
Maritime Mutemo muUAE
UAE Maritime Indasitiri Mitemo
Mutsva weMaritime Mutemo muUAE
Mutemo weMaritime muUAE, seyakazara, inzvimbo yakaoma kwazvo yemutemo. Ndiwo maitiro epamutemo anotonga mafambiro engarava, vafambisi vezvikepe, uye nezvimwe zvese izvi zvinoshandiswa pamusoro pemvura.
Yekutakura Maritime uye yekutengesa account yeiyo yakawanda chikamu yezvese zvihombe zvekushambadzira kutenderera pasirese. Uye muUnited Emirates, kupinza uye kutumira zviitiko zvakakosha. Nekudaro, ine imwe yemachiteshi anotyisa kwazvo pasirese. Iyo UAE inowanikwa mune imwe nzvimbo yeMiddle East iyo ine inorema yekutakura traffic uye inofarira kutakura kwegungwa. Iyo inzvimbo yakakosha mune zvehupfumi yekutakura, kutengeserana, uye zvemakungwa zviitiko.
Kwemakore mashoma apfuura, indasitiri yegungwa yanga ichirwisana neinogara ichichinja mamiriro epamutemo uye nekuda kwekuramba kuchikura kudiwa kwemasevhisi ekutakura, iyo indasitiri yakachinjika uye ikadzidza kuenderana neshanduko idzodzo. Kutumira masevhisi munzvimbo yeGulf kunovimba zvakanyanya nemutemo wegungwa mudunhu iri, sezvo ichipa hwaro hwakasimba hwemutemo wegungwa kune indasitiri.
Kunyangwe izvi, vanhu vazhinji havazive kuti mitemo inobata zviitiko zvinoitika pasi zvakasiyana neiyo inotonga hupenyu pamusoro pemvura dzinofamba. Kukuvara nenjodzi dzinoitika pamusoro pemvura dzinofamba nechikepe dzinoiswa pane yakasarudzika yemitemo pane iyo inoitika pasi. Mitemo iyoyo inotonga nyaya pamvura dzinofambika kazhinji inonzi Admiralty kana maritime law.
Uye iyi mitemo yemumakungwa ine zvakawanda zvinoomarara zvinogona kuita kuti zviome kufamba. Saka kana uchinge uchishanda muindasitiri yeUAE yegungwa, iwe unoda rubatsiro rwemagweta ane ruzivo nezvezvinhu zvepamutemo zvaunosangana nazvo mubhizinesi. KuAmal Khamis Advocates, magweta edu egungwa ane ruzivo uye hunyanzvi hwekupa rairo yezvemitemo uye mumiririri mukugadzirisa gakava remakungwa pamwe nekunyora ese marudzi emakondirakiti egungwa.
Chii chinonzi Chikamu cheMutemo weMaritime?
Maritime mutemo ndiwo wega mutemo wekutakura uye kufamba. Iyo yakasarudzika seti yemirau nemirau inotonga zvibvumirano, torts (senge kukuvara kwemunhu), uye muripo wevashandi zvirevo zvinomuka kubva mukukuvara kunotsigirwa pamvura dzinofamba.
Chiyero chemutemo wemakungwa muUAE unofukidza kutumira, kufamba, kudhonza, kuvaraidza chikepe, uye kutengeserana pamvura, zvese mudzimba nepasi rese. Inotarisa zviitiko mumakungwa echisikigo, nyanza, uye nzira dzemvura pamwe nemvura dzakagadzirwa nevanhu dzinogona kunge migero. Muridzi wengarava anogona kupihwa mhosva yekukuvara chero kupi zvako kune anoshanda mugungwa kana ngarava kana zvishandiso zvawo zvisina kukodzera uye zvichikonzera kukuvara.
Uye pasi pemutemo wegungwa, une kodzero yekutsvaga muripo wekukuvara kupi zvako kwaunowana mumvura dzinofamba, kunyange uri mutevedzeri kana mukwiri wengarava. Unogona kuwana zvinokuvadza zvinosanganisira zvakarasika mibairo, zvekurapa zvemubhadharo, zvinokuvadza zvemarwadzo nekutambura, uye kunyangwe kukuvara kwemanzwiro. Mutemo wemakungwa unofukidza zvakare kukuvara kunoitika pasi asi zvine hukama nebasa rinoenderera kumberi kwezvikepe zvegungwa (kana zviitiko zvekufambisa).
Chidimbu cheUAE Maritime Mutemo
Iyo UAE Maritime Code ndiwo mutemo unodzora kwese kuyemura uye kutumira maitiro muUAE. Inozivikanwa zvakare seUAE Federal Federal Nha. 26 ya1981. Yakagadzwa zvinoenderana nemitemo yazvino yepasi rose yegungwa uye inobata nenyaya zhinji dzemutemo weUAE wegungwa, kusanganisira nyaya dzakaita seiyi:
Kuva muridzi uye kushandiswa kwemidziyo;
Kodzero yekurara pamutoro wechikepe;
Kuzivikanwa kweiye anotakura;
Tenzi uye Crew yemudziyo;
Affreightment zvibvumirano uye kutakura zvinhu;
Towage uye pilage yemidziyo;
Kukonana kunosanganisira zvikepe;
Kununura kunosanganisira midziyo;
Inishuwarenzi yegungwa; uye
Nguva bhaa / muganho wezvikumbiro zvegungwa.
Iyo Maritime Code inoshanda kune ese manomwe manomwe Emirates. Chero chero muridzi webhizinesi anobatanidzwa mune chero chiitiko chegungwa muDubai kana zvimwe zvikamu zveUAE anofanirwa kucherechedza zviri pamutemo zvinodiwa pakutakura maritime.
Yedu yemutemo femu inotora nzvimbo yemutemo wegungwa zvakanyanya. Uye magweta edu egungwa anogona kukupa iwe ruzivo nezve kutevedzera iyo UAE Maritime Mutemo. Tinogona kukupa iwe yakazara ruzivo nezve izvo zvinhu zvinoitwa nemitemo yemugungwa yeAFA.
Mirau yeiyo Maritime Indasitiri muUAE
Iyo UAE Maritime Code ine zvikamu zvinoverengeka zvinofukidza ruzhinji rwezvinhu. Izvi zvinhu zvinobva pazvinhu zvine chekuita nezvinodiwa kunyoreswa kune inishuwarenzi yegungwa. Heano mamwe ematambudziko iwe aunogona kufunga nezvazvo kana uine zvirongwa zvekuita chero chinhu chine chekuita neMaritime Indasitiri muUAE:
# 1. Kuva muridzi weMidziyo nevekunze Investors muDubai
Vatorwa vane mabhizinesi muDubai vanofanirwa kucherechedza zvirevo zvekuva muridzi weAFA. Kana iwe uri mutorwa uye uine kambani yemakungwa muDubai, haugone kunyoresa ngarava dzako, zvikepe, uye zvimwe ngarava.
Vanhu chete vanobvumidzwa kunyoresa ngarava dzakadai ndeveUAE vemunyika, makambani, uye mabhizinesi ane angangoita 51% yevaUAE vemunyika sevaridzi. Kana vanhu ava vachitengesa yakanyoreswa yeAAE chikepe kune mumwe munhu wekunze kana chinzvimbo, iko kunyoreswa kweUAE kuchamiswa.
# 2. Kutakura Kwezvinhu neGungwa
Kutakurwa kwezvinhu nemugungwa zvinoita basa rakakosha muhupfumi hweAU. Izvi zvinodaro nekuti UAE ine zvikepe zvakati wandei zvakaiswa zvine hungwaru pamharadzano dzeMiddle East / maodzanyemba akadziva kumadokero kweAsia.
Naizvozvo, zvakakosha kuti iwe uve neruzivo rwakakwana rwemitemo zviri pamutemo maererano nekutakura zvinhu mugungwa, sezvavanoshanda muUAE.
Iyo UAE Maritime Code inovhara mutoro wevatakuri kunonoka kuendesa zvinhu. Anotakura zvinhu mumidziyo yegungwa muUAE anogona kuve nemhosva yekunonoka kuendesa zvinhu kuchiteshi chavo chekuenda.
Kazhinji, hapana kurasikirwa kwemuviri kana paine kunonoka kuendeswa kwezvinhu izvo. Nekudaro, iwe unogona kuwana zvinokuvadza kune chero kurasikirwa kwehupfumi kwawakatambura nekuda kwekunonoka kuendesa zvinhu.
# 3. Kugadziriswa kweMidziyo yeGungwa
Kubatira ngarava muAFA kunovhara charter yemarudzi ese engarava pagungwa, kusanganisira ngarava dzemidziyo, ngarava zhinji, matangi, uye kunyange ngarava dzekufamba.
Charter masevhisi anobata akasiyana marudzi echatera, kusanganisira voyage charter, nguva charter, bareboat charter, uye demise charter.
Pasi pechiratidziro cherwendo, iyo charter inopa ngarava uye inobhadhara kushandiswa kwayo kweimwe kana dzimwe nguva nzendo dzakawanda. Kune rimwe divi, maratidziro enguva anoitika kana uyo anoshanda achipa ngarava kwenguva yakatarwa
Uye nekuda kwekuparara marenda, muridzi wengarava anorendesa ngarava kune anochengeta uyo anopa vashandi, pamwe nezvitoro nemabunkers, uye anobhadhara mari dzese dzekushandisa.
Kana iwe uchironga kuchaya ngarava mugungwa muUAE, iwe uchafanirwa kuona kuti ndeupi rudzi rwecharter yekushandisa.
# 4. Kusungwa kweMidziyo yeGungwa
Hazvina kujairika kuti ngarava dzegungwa dzisungwe mumunda weUAE Maritime. Uye semuridzi wengarava, zvinogona kushungurudza kuti bhizinesi rako rikanganisike nekuti ngarava yako yakasungwa.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti zvisinei nemutemo unoshanda unotonga chibvumirano, matare eUAE anogona kupa kusungwa kana chiito chikaitika mukati meUAE.
Bhengi kana vimbiso yemari kudare ndiyo chete zororo kubva pakusungwa muUAE.
Bata Amal Khamis Vamiriri Vokubatsira Iwe Kuchengetedza Rako Bhizinesi reMaritime
At Amal Khamis Vatsigiri, isu tine nyanzvi Maritime Magweta anokwanisa uye anoshuvira kuona kuti iwe unoita isina musono bhizinesi regungwa muUAE.
Isu tine ruzivo munzvimbo dzakasiyana dzemutemo wegungwa, kusanganisira:
Tsaona dzeMaritime dzekurovera
Kukuvara kwemunhu pachake
Mhosva yemuridzi wemudziyo uye zvirevo
Inogona kuve yengozi inishuwarenzi uye marine inishuwarenzi
Kunyoresa, zvinyorwa, uye muridzi wengarava
Bhiri rekutakura kukakavara
Mutoro, Kutakura uye kutakura zvinhu zvine njodzi
Charter Party makakatanwa
Nguva bhaa yezvinyorwa zvemumvura; pakati pevamwe
Yedu yakasimba ichapa yakanangana, inoshanda, yega, uye inodhura mumiriri mukugadzirisa yako litigation kesi. Amal Khamis Advocates ikambani inotungamira mutemo yemakungwa muDubai ine ruzivo mumativi ese emutemo wegungwa unosanganisira mutemo wezvekutengesa, kutumira, kuvaka zvikepe, nemaindasitiri ekumahombekombe. Isu tiri timu yemagweta akazvipira uye ane ruzivo kubva kuguta reUnited Arab Emirates (UAE), avo vanopa mabasa epamutemo kune indasitiri yekutakura.
Kana iwe uchida rumwe ruzivo nezve kutumirwa kwegungwa uye kutengesa muUAE kana uchida kuti tikubatsire iwe nenyaya dzako dzegungwa, bata kambani yedu yemutemo mu Dubai.